Mitadiava Toerana Kanto Eo Amin'ny Tontolo Voajanahary | Taiguk Shapeshang - Faucets an-dakozia tsara indrindra 2021 | Faucets efitra fandroana tsara indrindra | WOWOW Faucets
Home / Interior design / Mitadiava toerana mahafinaritra eo amin'ny tontolo voajanahary | Taiguk Shapeshang
2021 / 06 / 16 FisokajianaInterior design 5460 0
"Ny faniriana ny fiainana voajanahary dia tsy hakamoana, avelao ihany ny fandosirana, fa fihemorana avy ao anaty korontana sy fisavorovoroan'ny famantarana mba hahatonga ny fiainana ho tsara tarehy kokoa."
– Taikoku Kagami
Amin'ny fiainana maoderina, ny fikatsahana fiainana mahafinaritra voajanahary dia nanjary rendez-vous. Ny fiainana mahafinaritra takatsika dia tsy ny fisehoana mahafinaritra ihany, fa koa ny fikorianan'ny voajanahary, ny hakanton'ny tontolon'ny fanahy, karazana fifandraisana ifanaovan'ny saina sy ny natiora.
Mba hahatanteraka ny "fanirian'ny fon'ny olona", Rongsheng Chengnan dia namorona fiainana mahafinaritra ankehitriny miaraka amin'ny dikany mahaolona sy voajanahary, manambatra ny habaka sy ny fiainana voajanahary, mampivondrona ny fampiraisana mirindra ny atitany, ny maritrano ary ny tontolo voajanahary, manome ny mpitsidika ny traikefa amin'ny fanovana ny haavon'ny toerana sy manova hatrany ny fomba fijery ny habaka.
“Mahafinaritra ny fihetsika eo amin'ny fiainana
dia singa iray manan-danja amin'ny fikatsahana ny habaka lamaody ”.
Ny lavarangana eo am-baravarana dia mivoha amin'ny marbra, ary ny loko alabaster mazava dia manome fahatsapana fahitana tsy miovaova amin'ny olona. Ireo singa hazo eo amin'ny farany ambany dia manome azy fahatsapana sosona superimposed, mamaritra ny fanjakana malalaka sy mirindra kokoa.
Ny habaka efajoro sy milamina miaraka amina boky voalamina tsara dia maneho fahatsapana ho voafintina. Ny fitsinjarana ireo takelaka rindrina mihetsiketsika dia maneho fahatsapana fahamaimaizana, ary ny fisanganana dia mazava sy miavaka, ka manapaka ny lamina tokana.
Rehefa avy nandalo ny rindrina aoriana dia nisokatra ny habaka mirentana sy malalaka an'ny boaty fasika. Ny fampiasana jiro tsy misy fotony dia manamora ny fifanakalozan-kevitra amin'ny majika eo amin'ny habakabaka sy ny hazavana ary ny aloka. Samy hafa ny haavon'ny jiro mihantona, ary mamirapiratra eo ambonin'ny latabatra fasika ny endrika tsy ara-dalàna, mamela hazavana sy alokaloka manjavozavo, mahatonga ny firaisana ara-nofo sy ny fahalianana hihaona.
Rehefa miditra ao amin'ny lavarangana ianao, ny rindrina miverimberina dia toy ny fikorianan'ny onja eny ambonin'ny rano, ary ny fikasihan'ny maitso dia midika natiora, mampifangaro ny mari-pana voajanahary sy ny fanamboarana ao anaty habakabaka miaraka, lasa mazava kokoa sy mora tohina ara-potoana.
Rehefa mifanena amin'ny utopia an'ny fanahy ny natiora dia hadika indray ny hakanton'ny habakabaka. Ny tsipika maritrano mirindra dia tsara tarehy nefa tsy mirehareha, tsotra nefa tsy mahazatra.
Ny masoandro dia afaka mitsambikina malalaka eny amin'ny habakabaka ary mikoriana malalaka, manangana tontolo buffer mahafinaritra ho an'ny tanàna miovaova hatrany.
Ny fanitsiana dia ny fikorianan'ny natiora
dia ny fandikana avy amin'ny fo ny fomba fiainana ”.
Ny fiainana mahafinaritra dia manasongadina ny tsiro sy ny dikany, fa tsy ny fiharihary miharihary ihany, fa koa ny fikorianan'ny voajanahary voajanahary, ny fihetsika matotra sy tompon'andraikitra amin'ny fiainana, ary ny fahatakarana ny fiainana matotra sy mitombina.
Eto isika dia afaka mahatsapa ny fotoana, ny habaka ary ny fiainana, ary ho lasa karazana fiainana mahatsapa. Ny habaka fanandramana dite tsotra sy voajanahary dia fomba iray ahitanao ny fiainana.
Mamorona fiainana miadana ao an-tanàna izy io ary mamela toerana fitsaharana mety ho an'ny sain'ny olombelona. Amin'ny endrika milamina sy teritery, ny habaka dia maneho ny rivotra iainana marefo sy mahaleo tena, mamoha ny fandriam-pahalemana sy fitoniana ao am-pon'ny olona.
Na avy amin'ny fampiharana fitaovana anatiny na haingon-trano anatiny, ny tanjona dia ny hampiasa ny fiteny famolavolana rustika indrindra hanalana ny hakanton'ny tontolo voajanahary tsy manam-paharoa. Mipoitra eo imasontsika ny seho "manjavona sy miverina amin'ny tena natiora" sy "mangalatra fialamboly antsasaky ny andro", izay azo ampiasaina hilazana ny toe-tsaina ankehitriny.
Ny fiainana milamina dia tsy ny fametrahana ny zava-tsoa rehetra fa mety daholo. Ny fifantohana amin'ny fahatsapana fahamendrehana koa dia toetran'ny rano mbola tony. Ary mahay mahita fifandanjana amin'ny fiainana, mamelona ny fanahy ary manome toerana malalaka hipetrahana ny fiainana, amin'izay ihany isika vao afaka manangona tanjaka sy mandeha lavitra.
. Drafitra voalohany
Plan Drafitra rihana faharoa
Anaran'ny tetikasa: Biraon'ny varotra Tangshan Rongsheng Jinxiu Qiancheng
Faritra tetik'asa: 1200㎡
Famolavolana anatiny: Taigu Shigashang
Volavola lehibe: Wang Guanghui, Liu Xiaoyi, Ai Yizhong
Mpamorona mpandray anjara: Li Wenqiang, Su Li Shanghai, Xiao Wei
Daty famaranana: 2021.04
Tompony: Vondrona Rongsheng
Saripika: Green Wind Photography
Mifantoka amin'ny famolavolana trano sy tany ara-barotra
Taigorge Design dia natsangan'Atoa Wang Guanghui. Hatramin'ny nananganana azy tamin'ny taona 2010, Taigorge Design dia niavaka tamin'ny famolavolana trano sy tany ara-barotra. Amin'izao fotoana izao dia nametraka fiaraha-miasa stratejika amin'ireo mpandraharaha ambaratonga voalohany toa ny Sunac, Longhu, Jinke, COFCO, Sino-Ocean, Zhengrong, Beida Resources, Luneng ary Zhengshang. Miaraka amin'ny rafitra fiaraha-miasa, ny orinasa dia manintona talenta famolavolana sy fitantanana matihanina kokoa, mampiditra ny endrika habakabaka, ny fandrindrana ny fandraharahana, ny fitantanana ny tetikasa ary ny sehatra maro samihafa, ary manolo-tena hanome ny fikarohana sy ny fampandrosoana ary ny serivisy fanoloran-tena ho an'ny mpamorona marika, hijerena bebe kokoa fahafaha-manao famolavolana ankehitriny sy sanda ara-barotra.
Ny "manome hery, mamorona sanda" no tanjontsika sy tanjontsika farany amin'ny famolavolana habakabaka. Ao amin'ny sehatry ny serivisy misy ny biraon'ny klioba / varotra, efitrano fampirantiana ary birao A. A, dia napetrakay hatrany amin'ny toerana voalohany ny filan'ny olona sy ny habaka, ary averinay indray ny tena ilain'ny habaka ho an'ny olona amin'ny alàlan'ny fomba famoronana. Mampiroborobo ny fampidirana sy ny fitohizan'ny famolavolana izahay, ary mizaha hatrany ny lalàna sy ny soatoavina amin'ny famolavolana miaraka amin'ny toe-tsaina manaiky sy ny fisainana isan-karazany, ary ny fandikana ny fifandanjana marefo eo amin'ny fahafahan'ny habaka sy ny lanjan'ny varotra miaraka amin'ny fanavaozana sy fampidirana an-tsehatra indrindra.
Previous :: Fomba amerikana maivana amerikana, manangana fombafomba amin'ny fiainana | Hongfu Gauge Design & Yishe malefaka haingo Next: Tsipika plastera, tokony hatao endrika toy izao!
2021 / 08 / 15 3383